Ebɛnadze Ntsi na Amandzehu Adɔɔ Sõ Dɛm? — Ɔweɔn-Aban INTANƐT DO NWOMAKORABEA
Ɔweɔn-Aban INTANƐT DO NWOMAKORABEA
bhs tsir 11 nkr. 116-123
Ebɛnadze Ntsi na Amandzehu Adɔɔ Sõ Dɛm?
Iyi no ho video nnyi hɔ.
Yeserɛ wo, biribi ntsi video no enntum emmbuei.
Nsɛm Afofor A Ɔnye Iyi Dzi Nsɛ
SIANTSIR A NYANKOPƆN MA AMANDZEHU HO KWAN
EBƐNADZE NTSI NA JEHOVAH ATWEƆN BER TSENTSENNTSEN DƐM?
EDZE HOKWAN A EWƆ NO BEDZI DWUMA DƐN?
Ebɛn Botae na Nyankopɔn Wɔ ma Nyimpa?Ebɛnadze na Bible no Kyerɛkyerɛ Hɛn?
1, 2. Ebɛn asɛm na nyimpa pii bisa?
ASAASEWOSOW si pomu na ɔsɛɛ kurow bi. Ɔbarimba bi twe itur wɔ asɔrdan mu na ɔdze kunkum nyimpa pii na ɔdze pirapira binom so. Kokoram yarba kum nã bi a ɔwɔ mba beenum ma ɔka mbofra no nkotsee.
2 Aber a esian a ɔtsetse dɛm esisi no, asɛm a nyimpa pii bisa nye dɛ, “Ebɛnadze ntsi a?” Nyimpa pii bisa siantsir a ɔtan nye amandzehu ayɛ wiadze yi mu mã dɛm. Ana esusu dɛm asɛm yi ho pɛn?
3, 4. (a) Ebɛn nsɛm na Habakkuk bisae? (b) Ebɛn mbuae na Jehovah dze maa no?
3 Bible no ma yehu dɛ, nyimpa a nna wɔwɔ gyedzi kɛse wɔ Nyankopɔn mu mpo bisaa nsɛm a ɔtsetse dɛm. Dɛ nhwɛdo no, Habakkuk bisaa Jehovah dɛ, “Ɔyɛ dɛn ntsi na ekyerɛ me emumuyɛ, na ehwɛ ɔbrakyew yi? na ɔsɛɛ na emimdzi wɔ m’enyim: na aperper wɔ hɔ, na mansotwe soɛr.”​—Habakkuk 1:3.
4 Sɛ yɛkenkan Habakkuk 2:2, 3 no a, yehu mbuae a Nyankopɔn dze maa Habakkuk wɔ ne nsɛmbisa no ho nye N’anohoba a ɔbɔɔ dɛ, obesiesie tsebea no. Jehovah wɔ ɔdɔ kɛse ma nyimpa. Bible no kã dɛ: “Ɔdwen hom do.” (1 Peter 5:7) Nokwar mu no, amandze a yeruhu no, Nyankopɔn enyi nngye ho koraa sen hɛn. (Isaiah 55:8, 9) Sɛ dɛm dze a, ma yensusu asɛmbisa yi ho, Ebɛnadze ntsi na amandzehu adɔɔ sõ wɔ wiadze yi mu dɛm?
5. Ebɛn nsɛm na nyamesom akyerɛkyerɛfo pii kã fa nyimpa amandzehu ho? Naaso, ebɛnadze na Bible no kyerɛkyerɛ?
5 Asɔfo na nyamesom akyerɛkyerɛfo taa kã dɛ, ɔyɛ Nyankopɔn ne pɛ dɛ nyimpa bohu amandze. Binom tum kã dɛ, adze biara a ɔto nyimpa, a esian ahorow kã ho no, yɛ dza Nyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ dadaw na yerunntum nntse siantsir a ɔtse dɛm no ase da. Binom so kã dɛ, nyimpa, a mbofra kã ho, wuwu mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɔkɔ Nyankopɔn nkyɛn wɔ sor. Naaso, ɔnnyɛ nokwar. Ɔnnyɛ Jehovah na ɔma ndzebɔn sisi ara da. Bible no kã dɛ: “Ɔmpar Nyame, dɛ ɔbɛyɛ ndzebɔnyɛ; na Otumfo no, dɛ ɔbɛyɛ emumuyɛ.”​—Job 34:10.
6. Ebɛnadze ntsi na nyimpa pii dze amandzehu a ɔrokɔ do wɔ wiadze yi mu nyina no ho sombo no bɔ Nyankopɔn?
6 Nyimpa pii dze amandzehu a ɔrokɔ do wɔ wiadze yi nyina no ho sombo no bɔ Nyankopɔn, osiandɛ wosusu dɛ Nyankopɔn na odzi wiadze yi do tum. Naaso dɛ mbrɛ yesũae wɔ Tsir 3 no mu no, Satan Abɔnsam na ɔyɛ wiadze yi hen.
7, 8. Ebɛnadze ntsi na amandzehu ebu do wɔ wiadze yi mu dɛm?
7 Bible no bɔ hɛn amandzɛɛ dɛ, “wiadze nyina da ɔbɔn no mu.” (1 John 5:19) Satan a ɔyɛ wiadze yi hen no, no ho yɛ hu paa na ɔyɛ otsiɔdzenyi so. Ɔno nye “wiadze nyina daadaafo no.” (Nyikyerɛ 12:9) Nyimpa pii na wosuasua no. Iyi nye siantsir kor ntsi a atordzi, ɔtan nye etsirmɔdzensɛm ahyɛ wiadze yi mu mã dɛm no.
8 Siantsir afofor bi wɔ hɔ ntsi a amandzehu ebu do wɔ wiadze yi mu dɛm no. Adam na Eve tseew etũa ekyir no, bɔn na wɔdze woo hɔn mba. Osian bɔn ntsi, nyimpa ma hɔn nyɛnko nyimpa hu amandze. Mpɛn pii no, nyimpa pɛ dɛ wobu hɔnho dɛ wɔkrɔn kyɛn afofor. Wodzi akõ, wɔkɔ ɔsa na wɔhyɛ afofor do. (Ɔsɛnkafo 4:1; 8:9) Osian “mber na esian” so ntsi, ɔtɔfabi a nyimpa hu amandze. (Ɔsɛnkafo 9:11) Akwanhyia na esian afofor tum to nyimpa aber biara wɔ beebiara.
9. Ebɛnadze ntsi na yebotum agye edzi dɛ Jehovah wɔ siantsir pa bi ntsi a ɔama kwan ma amandzehu rokɔ do no?
9 Ɔnnyɛ Jehovah na ɔdze amandzehu ba da. Ɔnnyɛ ɔno na ɔsɛ dɛ yɛdze akodzi, ewudzi nye ayaayaadze a wɔdze yɛ nkorɔfo no ho sombo no bɔ no. Nnyɛ Nyankopɔn na ɔdze esian ahorow tse dɛ, asaasewosow, ehum gyampaturdu nye nsuyirii ba. Naaso, ibia ibebisa woho dɛ, ‘Sɛ Jehovah nye obi a ɔwɔ tum sen biara wɔ wiadze yi mu a, ebɛnadze ntsi na onnsiw ndzɛmba a ɔyɛ hu dɛm a osisi no kwan?’ Yenyim dɛ Nyankopɔn dwen hɛn ho papaapa, ntsi ɔbɔwɔ siantsir pa bi ntsi a ɔama kwan ma amandzehu rokɔ do no.​—1 John 4:8.
10. Ebɛn kwan do na Satan bɔɔ Jehovah sombo?
10 Abɔnsam daadaa Adam na Eve wɔ Eden ture no mu. Satan bɔɔ Nyankopɔn sombo dɛ ɔyɛ Tumdzifo bɔn. Ɔkãa dɛ Nyankopɔn dze adzepa bi esuma Adam na Eve. Nna Satan pɛ dɛ wɔgye dzi dɛ ɔbɛyɛ tumdzifo papa asen Jehovah. Bio so, wonnhia dɛ Nyankopɔn dzi hɔn do tum.​—Genesis 3:2-5; hwɛ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 27.
11. Ebɛn asɛmbisa na ɔsɛ dɛ yenya ho mbuae?
11 Adam na Eve annyɛ setsie amma Jehovah na wɔtseew no do etũa. Nna wosusu dɛ wɔwɔ hokwan dɛ hɔnankasa si dza ɔyɛ papa nye dza ɔyɛ bɔn ho gyinae. Jehovah besi dɛn na ɔaama ada edzi dɛ, dza etuatsewfo no rekyerɛ no nnyɛ nokwar na mbom ɔno na onyim dza oye ma nyimpa?
12, 13. (a) Ebɛnadze ntsi na Jehovah annsɛɛ etuatsewfo no amonmu hɔ ara? (b) Ebɛnadze ntsi na Jehovah ama Satan kwan dɛ ondzi wiadze yi do tum? Na ebɛnadze so ntsi na Jehovah ama adasamba kwan dɛ wondzi hɔnho do tum?
12 Jehovah annsɛɛ Adam na Eve amonmu hɔ ara. Mbom no, ɔmaa hɔn kwan dɛ wɔnwo mba. Afei, Jehovah maa mba a Adam na Eve woo hɔn no kwan dɛ wɔmpaw nyia wɔpɛ dɛ odzi hɔn do tum. Nna Jehovah no botae nye dɛ, nyimpa a wodzi mu bɛhyɛ asaase do mã. Ɔmmfa ho mbɔdzen biara a Satan bɔe dɛ ɔbɛsɛɛ no no, dɛm botae no bɛba mu pɛpɛɛpɛr.​—Genesis 1:28; Isaiah 55:10, 11.
13 Satan bɔɔ Jehovah sombo wɔ abɔfo ɔpepem pii enyim. (Job 38:7; Daniel 7:10) Ntsi Jehovah maa Satan mber dɛ ɔmfa nkyerɛ nokwar a ɔwɔ sombo a ɔabɔ no mu. Bio so, ɔmaa adasamba mber dɛ wɔmfa nhyehyɛ hɔn amambu ahorow mfa ndzi hɔnho do tum wɔ Satan n’akwankyerɛ ase mfa nkyerɛ dɛ, anyanyanbiara obesi hɔn yie ber a Nyankopɔn no mboa nnkã ho anaa.
14. Ebɛnadze na mber ama ada edzi?
14 Mfrenhyia mpempem pii na adasamba abɔ mbɔdzen dɛ wobedzi hɔnho do tum, naaso woedzi ɔkogu. Wɔama ada edzi dɛ Satan yɛ ɔtorfo. Adasamba hia Nyankopɔn no mboa. Asɛm a nkɔnhyɛnyi Jeremiah kãe no yɛ nokwar. Dza ɔkãe nye dɛ: “Ewuradze, minyim dɛ ɔdasanyi no kwan nnyi nankasa ne nsamu: onnyi ɔdasanyi a ɔnam ne nsamu mbrɛ obodua etutu n’anamɔn.”​—Jeremiah 10:23.
15, 16. (a) Ebɛnadze ntsi na Jehovah ama kwan ma amandzehu akɔ do ber tsentsenntsen dɛm? (b) Ebɛnadze ntsi na Jehovah nnsiesiee haw ahorow a Satan dze aba no?
15 Ebɛnadze ntsi na Jehovah ama kwan ma amandzehu akɔ do ber tsentsenntsen dɛm? Ebɛnadze ntsi na onnsiw ndzɛmba bɔn a osisi no kwan? Ber tsentsenntsen a ɔagye no ama wɔada edzi dɛ Satan no tumdzi edzi ɔkogu. Adasamba asɔ amambu ahorow biara ahwɛ, naaso hɔn nsa esi famu. Ɔwɔ mu dɛ adasamba etu mpon wɔ abɔdzenyansahu nye mfirdwuma ahorow mu dze, naaso ndzebɔn, ohia, ewudzi nye akodzi adɔɔ sõ ndɛ sen mber biara a abɛsen kɔ. Sɛ Nyankopɔn ne nsa nnyi mu a, yerunntum nndzi hɛnho do tum ma onnsi hɛn yie.
16 Afei so, Jehovah nnsiesiee haw ahorow a Satan dze aba no. Sɛ ɔyɛ a, ɔbɛkyerɛ dɛ, Nyankopɔn taa Satan no tumdzi ekyir. Naaso, Jehovah nnkɛyɛ dɛm ara da. Bio so, nkyɛ adasamba bosusu dɛ wobotum edzi hɔnho do tum ma eesi hɔn yie. Naaso, dɛm nsusui yi yɛ ator. Ɔnnyɛ adze a Jehovah bɛtaa adasamba tumdzi so ekyir. Nyankopɔn runntum nndzi ator ara da.​—Hebrewfo 6:18.
17, 18. Ebɛnadze na Jehovah bɛyɛ wɔ haw a Satan dze aba no nyina ho?
17 Ana Jehovah botum esiesie ɔhaw a Satan nye adasamba etuatsew dze aba no nyina? Nyew. Nyankopɔn afamu dze, biribiara nnsõ no yɛ. Jehovah nyim ber a obobua Satan wɔ sombo a ɔdze abɔ no nyina ho. Iyi ekyir no, ɔbɛdan asaase paradise dɛ mbrɛ ahyɛse no nna nkyɛ ɔpɛ dɛ ɔyɛ no. Wobenyan hɔn a wɔwɔ nkaa “nda mu nyina” efi owu mu. (John 5:28, 29) Nyimpa nnkɛyar bio na wonnkowu ara so da. Jesus besiesie haw a Satan dze aba no nyina. Jehovah dze Jesus bedzi dwuma “ama ɔaasɛɛ abɔnsam ndwuma.” (1 John 3:8) Naaso, wɔ dɛm ber yi mu dze, hɛn enyi sɔ dɛ Jehovah enya hɛn ho abotar, mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum aba ebosũa no ho adze na yeetum esi gyinae dɛ yɛpɛ dɛ ɔyɛ hɛn Tumdzifo. (Kenkan 2 Peter 3:9, 10.) Kaansa yehu amandze mpo a, ɔboa hɛn ma yetum gyina ano.​—John 4:23; kenkan 1 Corinthfo 10:13.
18 Jehovah nnhyɛ hɛn dɛ yɛmpaw no dɛ hɛn Tumdzifo. Ɔmaa nyimpa hokwan dɛ womfi hɔn pɛ mu nyɛ hɔn adze. Ma yensusu mfaso a dɛm hokwan a ɔsom bo yi ma yenya no ho nhwɛ.
19. Ebɛn hokwan soronko na Jehovah dze ama hɛn? Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ yɛkyerɛ dɛm hokwan yi ho enyisɔ?
19 Hokwan a Jehovah dze ama hɛn dɛ yemfi hɛn pɛ mu nyɛ hɛn adze no ma yɛda nsew koraa fi mbowa ho. Mbowa fi nkãtse mu na wɔyɛ hɔn adze, naaso wɔ hɛn afamu dze, yebotum apaw dza yɛpɛ dɛ yɛdze hɛn asetsena yɛ. Bio so, yebotum esi gyinae dɛ yɛbɛyɛ dza ɔsɔ Nyankopɔn enyi anaa yɛrennyɛ dɛm. (Mbɛbusɛm 30:24) Afei so, yɛnntse dɛ mfir a wɔayɛ dɛ wondzi dwuma pɔtsee bi no. Yɛwɔ fahodzi no dɛ yɛpaw nyimpa ban a yɛpɛ dɛ yɛyɛ, hɔn a yɛpɛ dɛ yɛfa hɔn nyɛnko nye dza yɛpɛ dɛ yɛdze hɛn asetsena yɛ. Jehovah pɛ dɛ hɛn enyi gye wɔ asetsena mu.
20, 21. Ebɛn gyinae a odzi mu na ibotum esi ndɛ?
20 Jehovah pɛ dɛ yɛdɔ no. (Matthew 22:37, 38) Ɔtse dɛ egya bi a n’enyi gye ber a ne ba efi n’akoma mu akã akyerɛ no dɛ, “Modɔ wo” na ɔnnyɛ dɛ wɔhyɛɛ no ana ɔrekã. Jehovah ama hɛn fahodzi no dɛ, hɛnankasa yensi gyinae dɛ yɛbɔsom no anaa yɛronnsom no. Satan, Adam, na Eve sii gyinae poow Jehovah. Edze hokwan a ewɔ dɛ ibefi wo pɛ mu ayɛ w’adze no bedzi dwuma dɛn?
21 Fa hokwan a ewɔ dɛ ibefi wo pɛ mu ayɛ w’adze no som Jehovah. Nyimpa ɔpepem pii na woesi gyinae dɛ wɔbɔpow Satan na wɔaayɛ dza ɔsɔ Nyankopɔn enyi. (Mbɛbusɛm 27:11) Ebɛnadze na ndɛ ibotum ayɛ, mbrɛ ɔbɛyɛ a ebɔkɔ Nyankopɔn no wiadze fofor no mu bi ber a oeyi amandzehu nyina efi hɔ no? Yebenya dɛm asɛmbisa yi ho mbuae wɔ tsir a odzi hɔ no mu.
NOKWASƐM 1: NNYƐ JEHOVAH NA ƆDZE AMANDZEHU BIARA BA
“Ɔmpar Nyame, dɛ ɔbɛyɛ ndzebɔnyɛ; na Otumfo no, dɛ ɔbɛyɛ emumuyɛ.”​—Job 34:10
Ebɛnadze ntsi na amandzehu adɔɔ sõ wɔ wiadze yi mu dɛm?
Satan na odzi wiadze yi do tum.
Nyimpa na ɔma ne nyɛnko nyimpa hu amandze.
Ɔtɔfabi a, nyimpa hu amandze osiandɛ esian tum to hɔn aber biara wɔ beebiara.
Jehovah wɔ ɔdɔ kɛse ma nyimpa. N’enyi nngye ho koraa dɛ obohu dɛ woruhu amandze.
NOKWASƐM 2: SATAN BƆƆ JEHOVAH SOMBO WƆ HOKWAN A ƆWƆ DƐ ODZI TUM NO HO
“Nyankopɔn nyim dɛ . . . hom enyi bobue, na hom ayɛ dɛ Nyankopɔn, woehu papa nye bɔn.”​—Genesis 3:5
Ebɛnadze ntsi na Jehovah emmbu n’enyi enngu Satan no sombo no do?
Satan bɔɔ Nyankopɔn sombo dɛ ɔyɛ tumdzifo bɔn. Nna Satan pɛ dɛ nyimpa gye dzi dɛ, wɔwɔ hokwan dɛ hɔnankasa si dza ɔyɛ papa nye dza ɔyɛ bɔn ho gyinae.
Satan bɔɔ Jehovah sombo wɔ abɔfo ɔpepem pii enyim.
NOKWASƐM 3: SOMBO A SATAN BƆE NO ENNKESI HWEE
“Onnyi ɔdasanyi a ɔnam ne nsamu mbrɛ obodua etutu n’anamɔn.”​—Jeremiah 10:23
Ebɛnadze ntsi na nyimpa ehu amandze ber tsentsenntsen dɛm?
Nyimpa asɔ amambu ahorow pii ahwɛ, naaso sɛ Nyankopɔn ne nsa nnyi mu a, ɔnnyɛ adze a wobotum edzi asaase do tum ma eesi hɔn yie da.
Jehovah wɔ abotar na ɔama hɛn mber pii mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum aba ebosũa no ho adze na yaapaw no dɛ hɛn Tumdzifo.
Jehovah dze Jesus bedzi dwuma dze esiesie haw a Satan dze aba no nyina.
NOKWASƐM 4: FA HOKWAN A EWƆ DƐ IBEFI WO PƐ MU AYƐ W’ADZE NO SOM JEHOVAH
“Me ba, hu nyansa, . . . ama meenya bi mebua nyia ɔhyɛ me ahorohoraa no.”​—Mbɛbusɛm 27:11
Ebɛnadze ntsi na Jehovah nnhyɛ hɛn dɛ yɛnsom no?
Mbowa fi nkãtse mu tsitsir na wɔyɛ hɔn adze, naaso Jehovah ama hɛn hokwan dɛ yemfi hɛn pɛ mu nyɛ hɛn adze. Yebotum esi gyinae dɛ yɛbɔsom no anaa yɛronnsom no.
Jehovah pɛ dɛ yɛsom no osian ɔdɔ a yɛwɔ ma no ntsi.
Fante Nwoma Ahorow (2015-2018)
San mu yi dza epɛ